Akanaka uye anoshanda echinyorwa kudonhedza kofi vagadziri | Bezzia
Kugadzirira kofi ndeyevazhinji vedu tsika iyo nguva yekunakidzwa nerunyararo inotanga pakati pemangwanani kana pakati-masikati. Kuti tidaro isu tine dzimwe nzira dzakawanda, kuve iyo bhuku rekudonha kofi vagadziri kuti nhasi tinokurudzira zvakanakisisa kuti tiwane kofi yakaoma asi ine zvakawanda zvekunaka.
Yakanaka, inoshanda uye isina waya, Aya ndiwo mashandisiro anoita vagadziri vekhofi echinyorwa avo vatinofunga nhasi kuBezzia. Dzese dzakashongedzerwa nefirita iyo yakagadzikwa kofi yepasi uye panodururwa mvura inopisa nemaoko asi nemhando dzakasiyana kuti dzipinze kofi. Melitta, Chemex kana Hario, unosarudza!
Kwemazana emakore, kofi yaive yakagadzirirwa nekupisa pasi kofi muhari yemvura. Uye iyi michina yekofi iyo neimwe nzira inochengetedza iyo yakakosha asi ichivandudza kuravira kwekupedzisira kwekofi. Nyore kushandisa, vane zvakare mikana yakawanda pamusoro pemamwe marudzi evagadziri vekofi:
Vanotora nzvimbo diki mukicheni.
Iwo akareruka uye ari nyore kufamba.
Ivo vakanaka. Vanotaridzika vakakura pane iyo kicheni countertop.
Ivo havadi tambo.
Kushanda kwayo kuri nyore
Kureruka kwaro kunoita kuti kugadzikana kwayo kuve kwakakwirira.
4 Kugadzira kofi
Wanga uchiziva here kuti ndiye muvambi weMelitta akagadzira kofi yekusefa muna 1908? Gare gare, muma30s Melitta Bentz akaunza conical mafirita izvo zvakavandudza kunaka kwekofi nekugadzira nzvimbo hombe yekuburitsa kwayo. Mafirita atinoziva nhasi uye ave chiratidzo cheiyo firm.
Iwe uchawana mune Melitta katalog mapurasitiki, girazi uye porcelain firita vabati ine matsva grooves anovimbisa yakaenzana kofi kubudiswa. Uye zvakare, kuvhura kwaro kuviri kunokutendera iwe kuti ugovane mufaro wekunwa kofi, nekuti iwe unogona kugadzirira maviri panguva imwe chete. Uye hazvizokubhadhare iwe chero anodarika € 17.
Iwo mafafitera akabatana neMelitta Pour Pamusoro pegirazi carafe ichiri kukubvumidza nhasi gadzira kofi nenzira yakapfava uye yakanaka kune huwandu hwakanaka hwevanhu. Iyo karafa inogadzirwa negirazi borosilicate uye inogona kushandiswa nezvinopisa kana kutonhora zvinwiwa pasina njodzi yekuputsa. Iyo inokodzera iyo microwave uye nekuda kwechivharo chayo chinobviswa inogona kushambidzwa nyore nyore mudhishi yekuwachira.
Iyo iconic Chemex girazi jug rakagadzirwa neyeGerman chemistist Peter Schlumbohm muna 1941. Yakachena uye yakapusa dhizaini Inoita kuti itaridzike zvakanaka pamusoro penzvimbo ipi neipi yepamusoro. Iyo modhi ine mubato wehuni inonyanya kukatyamadza, pamwe nekupa kudziya kune dhizaini, zvinokutadzisa kupisa kana wakabata girazi rinopisa.
Vagadziri vekofi vanobatwa nemaoko vanowanikwa muhukuru hwakasiyana kuti vabike kubva pamakapu matatu kusvika gumi nematatu. Uye dhizaini yeayo fiber mafirita akakosha, mukobvu kupfuura makwikwi kuchengetedza zvinhu zvinovava, mafuta nezviyo kunze kwemukombe wako.
Hario yakavambwa muTokyo muna 1921 uye pakutanga yaigadzira zvigadzirwa zvegirazi zvemakemikari marabhoritari. Chimbo chako chakakurumbira cheV60, Yakagadziridzwa kusimudzira iyo portafilters yaivepo panguva iyoyo. Nekona ye60º, mvura inoyerera yakananga pakati pekugaya, ichiwedzera nguva yekubatana.
Iyi carafe nekoni inoiswa Kugadzira kofi yakasvinwa yakanaka kuitira kuti, pamutengo unodhura (€ 25), iwe unogona kuwana izvo zvaunoda kugadzira firita kofi zvine hunyanzvi kumba. Kuti uwane izvi, iwe unongofanirwa kuteedzera rairo yeiyo firm.
Chero ipi yemanyorero anodonhedza kofi muiti waunosarudza, iyo nzira yekugadzirira kofi ichave yakafanana chaizvo kusiyanisa chete chiyero chekofi nemvura inofanirwa kuwana mhedzisiro yakanaka. Kunyorovesa firita nemvura inopisa, kuyera pasi kofi yezviyo zviri pakati uye kuigovera zvakaenzana mufirita ndiwo matanho ekutanga ekutevera.
Ipapo iwe unongofanirwa kudziisa mvura uye nekuidururira mune gooseneck jug. Sei? nekuti neizvi zvichave nyore kwauri kuti uwedzere mvura inopisa pamusoro pekofi mumitambo yakatenderera kubva pakati kusvika kunze. Iyo tembiricha yemvura inozove yakakoshawo; Inofanira kunge iri pakati pe90 uye 94 degrees. Kana iwe usina thermometer, zvinokwana iwe kuti utore masekondi makumi mana mushure mekunge yavira.
Kune akawanda mavhidhiyo paYouTube ane anoshanda matipi ekushandisa aya manyore kudonha kofi vagadziri, vatarise!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Musha » Cooking » Makanaka uye anoshanda echinyorwa anodonhedza kofi vagadziri